काठमाडौं महानगरपालिकाका सहरी विकास विभाग प्रमुख देवेन्द्र डंगोल पनि अग्ला भवनहरू भूकम्पीय दृष्टिले बढी जोखिमपूर्ण हुने बताउँछन्। 'कोर एरियामा बनेका वर्षौं पुराना घर जोखिमपूर्ण हुनु त स्वभाविकै हो,' उनले भने, 'तर मापदण्ड पूरा गरी बनाइएका साना घर हाइराइजिङ विल्डिङभन्दा भूकम्पीय दृष्टिले सुरक्षित हुन्छन्।'
भवन निर्माणसंहिता ०५५ अनुसार उपत्यकामा घर बनाउँदा भूकम्प र आगलागीका हिसाबले सुरक्षित गराउन पर्याप्त खाली ठाउँ राख्नुपर्ने, भर्‍याङ सजिलो हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड तोकको छ। तर यस्ता मापदण्ड कसैले पनि पालना नगर्ने महानगरकै इन्जिनियरहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ मापदण्डविपरीतका यी घरलाई कारबाही त परै जाओस् कुनै पनि निकायले अनुगमनसमेत गर्दैन।
साना घर बनाउँदा नक्सा पास र अनुगमन महानगरपालिकाको जिम्मेवारी हो। ठूला अपार्टमेन्ट बनाउँदा उपत्यका नगरविकास समिति र भवन विभागको स्वीकृति चाहिने भए पनि सबैले यसको पालना नगर्ने इन्जिनियर डंगोल बताउँछन्।
'ठूला भवन बनाउन नगर विकास र भवन विभागको स्वीकृति लिएर आएपछि नक्सा पास गर्छौं,' उनले भने, 'वर्षमा पाँच हजारभन्दा बढी घर बन्छन्, त्यसैले अनुगमन गरेर साध्य नै हुँदैन।' उनले भवन कस्तो बनाउने भन्नेचाहिँ महानगरभन्दा डिजाइन गर्ने इन्जिनियरमै भर पर्ने उनी बताउँछन्।
कानुनत यस्ता ठूला भवनसंहिता अनुसार छ/छैन भन्ने हेरेरै मात्रै नक्सा पास गर्न सिफारिस गर्ने दायित्व नगरविकास समितिको हो। तर नगर नियोजक भाइकाजी तिवारी महानगरपालिकाकै कर्मचारीको मिलेमतोमा मापदण्डविपरीतका घर निर्माण हुने बताउँछन्।
'महानगरपालिकाका अधिकांश इन्जिनियरहरूका निजी कन्सल्टेन्सी छन्,' तिवारी भन्छन् 'आफैंले निजी कन्सल्टेन्सीमार्फत् गरेको डिजाइन नक्सा पास गर्ने बेला कसले रोक्छ?'
पछिल्लो समय केही हाउजिङ कम्पनीले नगर विकासबाट स्वीकृति लिए पनि व्यापारिक मलहरूले स्वीकृति नलिई बनाउने बन्ने गरेको उनी बताउँछन्। 'कुनै पनि व्यापारिक कम्प्लेक्सले निर्माणको सिफारिस लिन हामीकहाँ आएका छैनन्,' उनले भने। नगर विकास समितिको सिफारिस बिनै महानगरपालिकाले नक्सा पास गरेको उनको आरोप छ।
मापदण्डविपरीत बनाइएका घर भत्काउने भनेर दुई महिनाअघि प्रचारप्रसार गरिए पनि महानगरपालिकाले चासो नदेखाएकाले काम हुन नसकेको उनी बताउँछन्। 'महानगरले कारबाही गर्ने भनेर भन्यो तर त्यहींकै इन्जिनियरहरूले घर भत्काउँदैनौं भनेर मापदण्डविपरीतका घरका धनीहरूसँग पैसा मागेको चर्चा छ,' उनले भने। यसबारे उजुरीसमेत परेको केही समयअघि महानगरपालिकाले जनाएको थियो।
महानगरपालिका नक्सा शाखाका प्रमुख उत्तरकुमार रेग्मी नगर विकास समिती महानगरपालिका भन्दा माथिल्लो निकाय नभएकाले उसको सिफारिस मान्नुपर्ने बाध्यता नभएको बताउँछन्। 'महानगरपालिका स्वायत्त निकाय भएकाले यसले कसैको सिफारिस मान्न बाध्य हुँदैन।' रेग्मीले भने 'नगरविकासको काम हामीलाई प्राविधीक सहयोग गर्ने हो, निर्देशित गर्ने होइन।' उनले भवन विभागको समेत कुनै भुमिका नहुने बताए। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले महानगरपालिकाको मेयरलाई नक्सा पास गर्ने अधिकार दिएको र अहिले कार्यकारी प्रमुखले त्यो अधिकार पाएकाले त्यही व्यवस्था अनुसार काम हुने उनले बताए।
किन असुरक्षित हुन्छन् ठूला भवन?
महानगरपालिकाका इन्जिनियर देवेन्द्र डंगोलका अनुसार भुइँचालो जाँदा जमिनमा फोर्स पर्छ, र त्यसको झट्का सबैभन्दा बढी माथि हुन्छ। 'जति अग्लो भयो, झट्का उति बढी हुन्छ' डंगोल भन्छन्, 'बाँसको तल हल्लाउँदा माथि धेरै नुघेजस्तै हो।'
राजधानीका अधिकांश व्यापारिक भवन संस्थान वा सरकारी जग्गा लिजमा लिएर बनाइएकाले ती निश्चित वर्ष पुगेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। 'कामै नलाग्ने गरी बनाउने त होइन तर आजीवन उपयोग नगर्ने भएकाले मजबुत बनाउन धेरै ध्यान दिइँदैन,' एक निर्माण कम्पनीका इन्जिनियरले भने, 'अपार्टमेन्टहरूचाहिँ तत्काल बेचेर फाइदा कमाइहाल्नु पर्ने भएकाले पनि त्यसको बनावट त्यति गुणस्तरीय हुँदैन।'